ဘ၀င်မကျတာလေးတစ်ခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » ဘ၀င်မကျတာလေးတစ်ခု
Posted by weiwei on Nov 25, 2011 in Think Different | 52 comments
မြန်မာအိမ်အများစုမှာ ရိုးရာအယူအဆတစ်ခုလို အရိုးစွဲနေတဲ့ ဓလေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျား မိန်းမ ခွဲခြားဆက်ဆံလေ့ရှိတဲ့ သာဓကတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။ အ၀တ်အစားများကို သီးသန့်ခွဲလျှော်ခြင်းနဲ့ သီးသန့်မီးပူတိုက်ခြင်းကိစ္စပါပဲ။ ဟိုးအရင် အ၀တ်လျှော်စက်တွေ မပေါ်ခင်တုန်းကတော့ မသိသာပေမယ့် အခုစက်တွေပေါ်လာချိန်မှာ နဲနဲတော့ ကသိကအောက်ဖြစ်ကြရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့အိမ်မှာတော့ အဲဒီလိုပြသနာမရှိခဲ့ပါဘူး။ အ၀တ်အစားတွေကို ယောက်ျားလေးပုဆိုးတွေကိုသပ်သပ်၊ အကျီတွေအားလုံးကို ယောက်ျားမိန်းမမခွဲခြားဘူး၊ မိန်းမထမီတွေကို သီးသန့်၊ အမျိုးအစားခွဲလျှော်လေ့ရှိပေမယ့် အ၀တ်လျှော်စက်တစ်လုံးထဲပဲရှိပါတယ်။ တစ်လုံးထဲကိုပဲ အသုံးပြုတယ်။ မီးပူလဲ တစ်လုံးထဲပါပဲ။ အားလုံးကို တိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မသူငယ်ချင်း လင်မယားနှစ်ယောက်ထဲနေပြီး အ၀တ်လျှော်စက် ၂ လုံးတဲ့။ တစ်လုံးက ယောက်ျားအ၀တ်တွေလျှော်ဖို့နဲ့ တစ်လုံးက မိန်းမအ၀တ်တွေပဲလျှော်တယ်တဲ့။ မီးပူကလဲ ၂ လုံး၊ ထမီတိုက်ဖို့ တစ်လုံးသီးသန့်ထားတယ်တဲ့။ ဆပ်ပြာတောင်မှ ၂ တုံးထားခွဲပြီး သုံးတာတဲ့။ အံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ်ပါပဲ … ယောက်ျားတွေ ဘုန်းကံနိမ့်မှာကို စိုးရိမ်တတ်တဲ့ ရိုးရာအယူအဆတစ်ခုကြောင့်ပါပဲ။ အစွန်းရောက်တယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ အ၀တ်လျှော်စက် ၂ လုံးဝယ်နိုင်လို့ ပြသနာမရှိဘူးပဲထား (ဒါတောင် အိမ်ရှုပ်သေးတယ်) … တစ်လုံးတောင် အနိုင်နိုင်ဝယ်ထားရသူတွေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ …
အ၀တ်အစားတွေမှာ ဘာဘုန်းကံများရှိလို့လဲ? မြတ်စွာဘုရားနဲ့ သံဃာတော်တွေတောင်မှ ပံ့သကူအ၀တ်ဆိုရင် မိန်းမထမီလဲ ၀တ်ကြတာပဲမဟုတ်လား? အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေသွားပြီးရင်တောင် သူ့ထမီတွေကို ဘုန်းကြီးကျောင်းပို့ပြီး လိုက်ကာလုပ်ပြီးလှူကြသေးတာပဲ မဟုတ်လား? အမေကမွေးပေးမှ လူဖြစ်လာရတာပဲ မဟုတ်လား?
အဲဒီအယူအဆတွေအရိုးစွဲနေတာများ တစ်ယောက်ထဲနေတာတောင်မှ ခွဲခြားလေ့ရှိကြသေးတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထဲ အဆောင်မှာနေပြီး ထမီလျှော်တာသပ်သပ်၊ အကျီလျှော်တာသပ်သပ်၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါလျှော်တာသပ်သပ်နဲ့ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတာပဲ။ ကျွန်မကတော့ ပစ္စည်းတွေများတာကို မကြိုက်ဘူး။ အ၀တ်တွေကို စက်နဲ့လျှော်ဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ အကောင်းတွေကို လက်နဲ့လျှော်တယ်။ အ၀တ်လျှော်တဲ့ ပလပ်စတစ်ဇလုံတစ်လုံးထားထားရတာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ တစ်ယောက်စာ အသုံးအဆောင်အားလုံးကိုသုံးပါတယ်။ all in one ပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လာနေလေ့ရှိတယ်။ စစချင်းတုန်းက ထမီလျှော်ဖို့ ဘယ်ဟာနဲ့လျှော်ရမှာလဲတဲ့ … ကျွန်မက တစ်ခုတည်းသော ဇလုံကြီးကို လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တော့ အဲဒါ အကျီလျှော်တာလေတဲ့ … အ၀တ်လျှော်ပြီးရင် အဲဒီဇလုံက သန့်နေတာပဲလေလို့ … ဘာတွေများကပ်ကျန်ခဲ့လို့လဲလို့ …
ကျွန်မ နိုင်ငံခြားသူတွေနဲ့ နေခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့တွေမှာ ဘာအယူမှမရှိပါဘူး။ နေရောင်ရတဲ့နေရာမှာ အားလုံးကိုလှမ်းလိုက်ကြတာပဲ။ အတွင်းခံဘောင်းဘီက ခေါင်းပေါ်မှာရောက်နေတတ်တယ်။ မျက်နှာသစ်တဲ့ဘေဇင်ထဲမှာပဲ ထည့်လျှော်နေတာ မြင်နေရတာပဲ။ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ? ဘာမှရွံစရာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မကတော့ထင်တာပဲ။ ကျွန်မက မြန်မာမို့လို့ အဲဒီလောက်အထိတော့ မလုပ်ပါဘူး။ အမြင်မတော်တာကို မမြင်အောင် ထားပါတယ်။
မြန်မာအမျိုးသားတွေလဲ မိန်းမတွေကို ဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့လို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ အ၀တ်လျှော်စက်ထဲမှာ ထမီထည့်လျှော်ဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဘက်ကလဲ သိပ်အယူမသီးကြပါနဲ့။ ယောက်ျားတို့ဘုန်းကံနဲ့ ထမီနဲ့ ဘာမှမသက်ဆိုင်ပါဘူးလို့ …
ရှေးကတည်းက အရိုးစွဲနေတဲ့ အယူအဆမို့လို့ပါ။ ပဒေသရာဇ်စနစ်ဆိုးတွေ လက်ခံကျင့်သုံးနေဆဲမို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်သူတွေကတော့ မဟာပုရိသ၀ါဒကို လက်ကိုင်ထားပြီး ယောကျာ်းမို့ ပိုမြင့်မြတ်တယ်၊ မိန်းမမို့ ယုတ်ညံ့တယ်ဆိုပြီး အတွေးတွေ ခေါင်းထဲ ရိုက်သွင်းခံထားရတာ ဘာသာရေးကြောင့်လဲ ဆိုင်မယ်ထင်တယ်။ တစ်ကယ်တော့ အဲလိုအတွေးမျိုးဟာ လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းကိုလဲ အနှောင့်အယှက်၊ အတားအဆီးဖြစ်ရာလဲ ကျပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မိန်းကလေးကို လူနဲ့လူချင်း အတူတူပဲဆိုပြီး တန်းတူအခွင့်အရေးပေးထားတာပဲ။ ဘုန်းကံနိမ့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ လူတွေပြောတာတွေအကုန် လိုက်လုပ်ကြည့်ပြီးပြီ၊ အလကားလျှောက်ပြောနေကြတာ။ ဘာဆိုဘာမှ မဆိုင်ပါကြောင်း….
အေးပေါ့ မောင်ရှုံးရာ၊ မင်းက မိန်းမယူတော့မယ့်ကောင်ဆိုတော့ ဘုန်းကံမနိမ့်ပါဘူး ဘာညာနဲ့ အခုထဲက ကြိုကန်ထားပြီးပေါ့။…ယောက်ျားတို့ဘုန်း လက်ရုံးတဲ့၊ မင်းကောင်မလေးကို ဘယ်ဘက်လက်မောင်းပေါ်မှာပဲ ခေါင်းတင်အိပ်ခွင့်ပေး၊ ငမိုးရိပ်မိချောင်းကြီး သူ့သခင် မင်းနန္ဒာကို မကယ်နိုင်တာ ရှင်မွေးလွန်းကို အလိုလိုက်မိလို့။ နင်နဲ့တော့ မလွယ်ပါဘူး။ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်ရအောင် ညကထဲက အဝတ်ဘီဒိုထဲ ဝင်စောင့်ကြည့်နေမှပါ။။။
ကျနော်တို့ငယ်ငယ်က မြို့ထဲတိုက်ခန်းများမှာ အထပ်ခိုးတင်တာ ခေတ်စားတော့ အယူအစွဲကြီးသူများက အိမ်ကြီးထဲ အိမ်လေးမထည့်ကောင်းလို့ ဝေဖန်ကြတယ်။ မြန်မာလူမျိုးပီပီ ယုံချင်ကြပေမဲ့ တိုးပွားလာတဲ့ မိသားစုအရေးကြောင့် အဲဒီအယူလည်း ပျက်သလောက် ဖြစ်သွားရတယ်။ အဝတ်အစား အတူတူလျှော်တာလည်း ကျနော်သိသလောက်တော့ နိုင်ငံဂျားမှာ စက်တလုံးထဲ ထည့်လျှော်၊ အခြောက်ခံတာပါပဲ။ (မှတ်ချက်။ လိင်တူကိစ္စနှင့် မရောပါနှင့်) မြန်မာပြည်မှာလည်း ရလို့လုပ်နေကြတာပါ။ ကျနော်တို့အိမ်မှာဆို ရေခဲထားတဲ့ အသားငါး ဘယ်သူမှ မစားဘူး၊ မနက်တိုင်း အမေ ဈေးသွားဝယ်ရတယ်၊ နေ့တိုင်း ဟင်းချက်ပေးရတယ်။ နောက်တနေ့စာ ပိုဝယ် ရေခဲရိုက်ထားလိုက်တာနဲ့ ကွန်ပလိန်းတက်တော့တာပဲ၊ အရသာက သိနေတယ်လေ။ နိုင်ငံဂျားရောက်တော့ မစားရင် ငတ်ဖို့သာရှိလို့၊ ပြီးတော့ ဆိုင်တွေမှာရှိတဲ့ အသားငါးအားလုံးက ရေခဲရိုက်ပြီးသားဖြစ်လို့ ဒီလိုနဲ့ အကျင့်ဖြစ်သွားတာပဲ။ ရတော့ လုပ်တယ်၊ မရတော့ မလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့်ပဲ အသိညဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့ အသိညဏ်မရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်ဆိုပြီး ကွဲပြားသွားတာ မဟုတ်လား။ အန်တီဝေ အဟိတ် တိရစ္ဆာန်လား၊ ဒွိဟိတ်လူသားလား စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစေ။။
ပလတ်စတစ်ဇလုံကတော့ ဈေးလည်းမကြီးတာရယ် သိမ်းစရာနေရာမယူတာရယ်ကြောင့်
ဂီဂီ တို့ အီးတီတို့ ကြားတယ်နော်….”အယူသည်းလွန်းတဲ့လူတွေတော့ သိပ်ကြည့်လို့မရဘူး ”
အမှန်တော့ သတိပေးစရာတောင် မလိုပါဘူး .. ဒါမျိုးဆို လျှင်ပြီးသားတွေပါ……. :grin:
ဝေေ၀ရေ.. အမှန်တော့ ကိုယ့် အတွေးနဲ့ ကိုယ်တွေပါဘဲ… ကြာရင်တော့ ပျောက်သွားမှာပါ.. ဘယ်လောက်ကြာအောင် စောင့်ရမလဲတာ မသိတာ..
လူ့ လောကမှာရှိတဲ့ ယောက်ျားလေး အားလုံး အမေ့ဗိုက်ထဲက ထွက်လာတာပါပဲ။ ခွဲမွေးတဲ့သူတွေဘဲ ဘုန်းရှိမယ်ထင်တယ်။ တားတားကရိုးရိုးမွေးတာဆိုတော့ ဘုန်းရှိ၊ မရှိ မသိဘူး လောလောဆယ်တော့ ဖုန်းတောင် မရှိသေးဘူး။ အယူလည်း မသည်းပါဘူး။ အယူသည်းတဲ့သူတွေကိုလည်း မကြိုက်ပါဘူး။ စိတ်ချင်းဆက် နေလို့ လားမသိ မမိုးဇက်နဲ့ သွားတူနေတယ်
ဇာချဲ့လို့ ရလို့ ချဲ့နေတာပါ ၊ ချဲ့လို့ မရတော့တဲ့နေ့ အလိုလို ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်တို့လဲ ထမီထဲက ထွက်လာတာပါပဲ… ( အမေ့ထမီနော် )
တော်သေးတာပေါ့ ကွင်းစကွင်းပိတ် အမေ့ထမီနော် ပါလို့ 
နို့.. မဟုတ်လို့ ကတော့ တမာရွက်ပြုတ် နဲ့မျှစ်ချဉ်ဟင်း
ဝင်စားတယ်လို့ ထင်နေကြမှာ ….
အနှီ ဘားမား ရိုမီယို ဂျူးလိယက် ဇာတ်ကို ယုံလို့လားဗျ…
ဘယ့်နှယ့် မိချောင်းကြီး စီးတာတွေရော အာခံတွင်းထဲကလိုက်တာတွေရော…
(သည်လိုဇာတ်မျိုးသာ ကျုပ်လက်ထက်မှာသာ ဆို ဆင်ဆာကျမှာ မဟုတ်ဝူး)
သူ့ဟာသူ လှေနဲ့ မိန်းမ လာလာ ငန်းရာကနေ လှေနစ်သေတာ နေမှာပါဗျာ..
မိချောင်းတွေ ဘာတွေက cooked figure တွေပါ…
အထီးအမ မခွဲနဲ့ ဦး လူတယောက်ထဲမှာကိုပင် ဘယ်နဲ့ ညာ ကို ခွဲခြားကိုက
အဓိပ္ပါယ်မဲ့လှပီ။ ညာက မြင့်မြတ်တာ ဘယ်က ယုတ်ညံ့တာဆိုပြီး…
ဘာတဲ့ ထမင်းစားတဲ့လက်နဲ့ ထမင်းကုန်းတဲ့လက် ….ဟွန်း..
သည်တော့ကာ ဆြာရှုံးရေ့ ဆြာ့ စိတ်ပူလို့ ဦးကြောင်နဲ့တူတူ
ဗီရိုထဲကနေ စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်ပေးပါ့မယ်…
ဒါနဲ့ လူတယောက်လုံး ငုံထားနိုင်မယ့် အရွယ် မီဂါ မိချောင်းရှိရင် ဖမ်းချင်ထှာ ..
မီလျံဘတ်ဇနစ် ဖြစ်မှာ …နော သဂျီး…
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး .. အလုပ်ထဲမှာအတူလုပ်တဲ့ အသက် ၅၀ ကျော်အဒေါ်ကြီးက သူ့သားလူပျိုနဲ့ ၂ ယောက်ထဲနေပြီး သူကလဲ အိမ်ဝေယျာဝစ္စအားလုံးလဲလုပ်ရသေးတယ် .. သူ့ထမီကျတော့ စက်နဲ့မလျှော်ဘူး .. သူ့သား ဘုန်းနိမ့်မှာစိုးလို့ဆိုလို့ … ဘ၀င်မကျဖြစ်ပြီး ရေးလိုက်တာ …
အားလုံးပြောတာတွေစဉ်းစားရင်းနဲ့ခေါင်းတောင်တော်တော်မူးသွားပြီ…ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ကိုယ် လုပ်ချင်သလိုလုပ်နေတဲ့လူအချင်းချင်း…သဘောထားတွေကတော့ အားလုံးကွဲလွဲနေမှာပဲ…မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းတောင် နေထိုင်မှုပုံစံတွေမတူညီကြတာ
တစ်ခြားနိုင်ငံဆိုရင်တော့ ပြောမနေနဲ့တော့ ….အဲဒါတွေအားလုံးကို လိုက်ညှိရမယ်ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာသာပျက်ချင်ပျက်သွားမယ်…ဘယ်တော့မှတူညီလာမှာမဟုတ်ဘူး… ကိုယ်မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေက အများအများကြီးပါ…ကိုယ့်ရဲ့ရှေးဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ကနေဒါတွေ အစပြုလာတာဆိုတော့ တစ်ကယ်တမ်းအမှန်လိုချင်ရင်တော့ လူဘယ်ကဖြစ်လာတာက စဆွေးနွေးပြီး…ဘယ်သူက ဒါတွေကို စီစဉ်ခဲ့သလဲကနေစရမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်…လူဖြစ်တယ်ဆိုတာတောင်…ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ တစ်မျိုး၊ ခရစ်ယာန်မှာတစ်မျိုး၊ အစ္စလာမ်မှာတစ်မျိုး…ပြောကြတာပဲမဟုတ်လား….အဲဒါကြောင့်…… အဲဒါပါပဲ…lone လည်းမပြောတတ်တော့ဘူး…
ရန်ကုန်တိုက်ခန်းမှာနေသူတွေ မိုးတွင်းမှာ အ၀တ်လှန်းရတာ သိပ်ဒုက္ခရောက်တယ် … အ၀တ်လျှော်စက်နဲ့ခါပြီးလှန်းမှသာ အဆင်ပြေတာမို့ ဒီကိစ္စကလဲ အရေးပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ် …
နောက်တစ်ခုက နေပူတုန်းအ၀တ် (ထမီအပါအ၀င်) ကို ၀ရန်တာမှာလှန်းထားပြီး အမေ သို့မဟုတ် မိန်းမက ဈေးသွားတယ် … အိမ်မှာ အဖေ သို့မဟုတ် သား တစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့တယ် … ခဏနေတော့ မိုးရွာလာတယ် .. အဲဒီအချိန်မှာ မဟာပုရိသ ယောက်ျားတွေက ထမီကိုလက်နဲ့ကိုင်ရမှာ ရွံသလိုလို ကြောက်သလိုလိုနဲ့ မရုတ်ပေးတာလဲ မကြာခဏကြုံဖူးပါတယ် (ကျွန်မအဖေအပါအ၀င်) …
အမေတွေ မိန်းမတွေကို ဒုက္ခပေးတတ်တာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့လေ …
ကမ္ဘာကြီးနဲ့ မချီပါဘူး .. ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကိုသာ ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် …
ကျွန်တော်ဆို အမေ့ထမီကိုတောင် လျှော်ပေးပါတယ်ဗျာ
အမ အကျီတွေလဲ လျှော်ပေးဘူးတယ်
အဲလို ကိုင်ရမှာ ရွံတဲ့သူတွေက
ဟိုလိုအချိန်ကျ ရွံချင်မှ ရွံမှာပါ
အိမ်မှာတော့ အ၀တ်လျှော်စက်နဲ့ အလှည့်နဲ့ လျှော်တယ်။ အကျီတွေ စုပြီးတော့ တခါလျှော်တယ်။ ထမိန်တွေ စုပြီးတော့ တခါလျှော်တယ်။ အဖေ ရှိတုန်းကတော့ အ၀တ်လျှော်စက် ၃လုံး ရှိတယ်။ အဖေ အကျီ တွေ ပုဆိုးတွေ မိသားစုဝင်တွေ အကျီတွေ လျှော်ဖို့ စက်တလုံး အမျိုးသမီး ထမိန်တွေကြီးပဲ လျှော်တဲ့ စက်က တလုံး ကြမ်းတိုက်ဝတ်တွေ လျှော်တဲ့ စက်က တလုံး.. နောက်တော့ ရှုပ်တာနဲ့ ပိုတာတွေ အကုန် သူများ ပေးလိုက်တယ်။ အိမ်မှာ ၁လုံးပဲ သုံးဖြစ်တော့တယ်။ ဘုန်းနိမ့်တာ မြင့်တာထက်.. အဖေ အတွက် သီးသန့် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အားလုံး လုပ်ပေးဖြစ်တာ များတယ်.. နေမကောင်းတဲ့ လူဆိုတော့ ခဏခဏ လျှော်စရာ အ၀တ်တွေကလည်း ထွက်တယ် လျှော်ကြီးပဲ လျှော်နေရတာ.. ကိုယ်တွေ အ၀တ်တွေကတော့ ၂ရက်လောက် ၃ရက်လောက်မှ တခါ လျှော်ဖြစ်တာပဲ။ မီးပူကတော့ တစ်လုံးပဲ သုံးတယ်။ အ၀တ်လျှော်ပြီးရင် အကျီတွေ တိုက်တာက အမ လုံချည်တွေ တိုက်တာက ဆူး ဆိုတော့ တူတူလည်း တွဲပြီး မတိုက်ဖြစ်ဘူး။
အယူသည်းတာမှ တချို့ဆို ရေချိုးခန်းထဲ ရှုးရှုးမပေါက်ရဘူး ဆိုတာ ရှိသေးတယ်။ အဲလို လူမျိုးတွေ ရေချိုးရင်း ရှူးရှူးမပေါက်ကြဘူးနဲ့ တူတယ်။ ဟိဟိ..
ဟိုတယ်တွေဆိုရင် ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာ တွဲ ထားတာ အဲလို ဆို ဒုက္ခပဲ.. ညစ်ပတ်တယ် ဆိုပြီး ရေမချိုးပဲ ညစ်ပတ် ခံကြမလား မသိဘူး။
ရေချိုးခန်းထဲ ရှုးရှုးပေါက်တာတော့ ကြာရင် နံမယ်ထင်တယ်
ပို လန်းမယ် ထင်တယ်နော
အယူသည်းတာမှ တချို့ဆို ရေချိုးခန်းထဲ ရှုးရှုးမပေါက်ရဘူး ဆိုတာ ရှိသေးတယ်။ အဲလို လူမျိုးတွေ ရေချိုးရင်း ရှူးရှူးမပေါက်ကြဘူးနဲ့ တူတယ်။ ဟိဟိ.. ဆိုတော့…အဲ့လို မဟုတ်တဲ့လူတွေကျတော့ ရူးရူးပေါက်ကြသလားဟင် အမ … ဟီးဟီး
မဝေရေ ..အယူသည်းတာက အရမ်းကြီးလွန်သွားလျှင် မကောင်းတတ်ဘူးနော် … ။ အိမ်မှာကတော့ အ၀တ်လျှောက်စက်ကို စောင်တို့ ၊အိပ်ယာခင်းတို့လောက်သာသုံးပြီး … အ၀တ်စားတွေကို လက်နဲ့လျှော်ဖြစ်တယ် … ။ လျှော်စက်ထဲက ညှစ်တဲ့ဒဏ် …. စပို့ ရှပ်လိုအသားတွေဆို … ရွဲ့စောင်းသွားတာမျိုး ၊လည်ပင်းတွေကျယ်လာတာမျိုးနဲ့ … တချို့ အရောင်ကူးတဲ့ အ၀တ်တွေဆို ခဏခဏဆေးကူးသွားတတ်တာတွေကြောင့် လည်းပါတယ် … ။ လူပိုလည်း မထားတော့ ..ကိုယ့်အ၀တ်ကိုယ်လျှော်ရင်း အဆင်ပြေနေကြတယ် … ။ အဖွားက ရှေးလူကြီးဆိုတော့ အယူသည်းတယ် .. မီးပူတိုက်တဲ့ အ၀တ်ခင်းကိုတောင် ထမိန်တိုက်လျှင် တစ်ခုသက်သက်ထားတယ် … ။
ကိုယ်တွေကလည်း ဘယ်ရမလဲ .. အခင်းပြားပြန်လဲရမှာစိုးလို့ .. တလက်စတည်း … လစ်လျှင် လစ်သလို တိုက်ပစ်လိုက်တာပဲ
လျှော်တာတော့ ပြောတော့ဘူး..တချို့တွေက ထမိန်တွေ ထိရင်တောင် ဘုန်းနိမ့်တယ်ရှိသေး လွန်ပါ့..
တခါတလေများ မိုးရွာလာလို့ အ၀တ်ရုတ်မယ်ဆို အမေ က ထမိန်ဆို မရုတ်ခိုင်းချင်ဘူး.
ဘုန်းနိမ့် မယ်အော်တာပဲ. ဘယ်ရမလဲ ဘုန်းနိမ့်မှာ ကြောက်နေရင် မိုးရွာလို့
ထမိန်တွေရေစိုသွားမှာကို ထိုင်ကြည့်နေရမှာလား.တာဝန်သိစိတ်နဲ့ ဘုန်းနိမ့်မှာနဲ့ ရောချလို့ဘယ်ရမလဲနော
ပြောချင်တာကတော့ တချို့တွေကတော့ ဘုန်းနိမ့်မှာ ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့
အကြောင်းပြချက်ကြီးနဲ့ ရေသာခိုနေကြတာတွေ အများကြီးပါ…
အဲလိုတွေ အကြောင်းပြချက်ပေးရင်း မိန်းမလုပ်စာ ထိုင်စားတာတွေလဲ မရှား..
ကျွန်တော်ကတော့ မခွဲခြားဘူး..လိုအပ်ရင် လုပ်ရမဲ့ဘက်က ရှိတယ်..
ေ၇ချိုး၇င်း ၇ုတ်တ၇က်လေဖြတ်သွားတဲ့ လူတော်တော်များများဟာ ရှုးရှုးပေါက်ရင်းဖြစ်တာတဲ့..
မ အိတုံ…ဖြစ်နိုင်/မဖြစ်နိုင် ပြောပြပါလား..။
သူများတော့ မသိဘူး ဆူး အိမ်မှာတော့ အိမ်သာ ရေချိုးခန်း တွဲလျက်ပဲ.. ရှူးရှူးတင်မကဘူး အီးအီးပါ အေးဆေး ပါလို့ ရတယ်။ ပြီးရင် ရေလေးဆွဲလိုက်တာပဲ.. ဘာမှ သိပ်ပြီး ထွေထွေထူးထူး မတွေးမိပါဘူး။
ကိုရှုံးပြောသလို ရှေးရိုးစွဲ အယူအဆကြောင့်ပါ၊ အတူတူသုံးရင် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါသယ်ရဲ့ ပစ္စည်းကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံး all in one ပဲဖြစ်သင့်ပါတယ် all in one လုပ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ရေကုန်၊ဆပ်ပြာကုန်၊အချိန်ကုန် သက်သာပါတယ်။နိုင်ငံခြားမှာဆို တဘက်တထည်ကိုပဲ (ကိုပုရေးတဲ့ တဘက်တထည်ရဲ့ ပို့စ်ထဲကလိုမျိုး) ခေါင်းကနေစသုတ်ပြီးတကိုယ်လုံး ဆင်းလာလိုက်တာ အောက်ခြေဖျား ခြေကြားအထိပါပဲ။ပြီးတော့ ဇလုံတလုံးတည်းကိုပဲ အားလုံးက အဲဒီဇလုံထဲမှာပဲ ခေါင်လျှော်၊ခြေဆေး၊အတွင်းခံဘောင်းဘီ.ခြေအိပ်.လက်အိပ်.အ၀တ်စုံစိမ်၊ပြီးတော့ဖိနပ်ပါစိမ်တယ်ဗျာ အဲဒီလိုလုပ်လို့ ဘုန်းနိမ့်ပြီး မာကလီးယားမယ်ဆို အဲဒီလူတွေလေ စက်ရုံကနေ အိမ်အပြန် ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်မှာ ကားမောင်းရင်း အက်ဆီးဒင့်နဲ့ သေကုန်ကြပြီပေါ့။
ကျွန်တော်တို. ရပ်ကွက်ထဲက အဒေါ်ကြီးဆို သူယောင်္ကျား ဘုန်းနိမ့်မှာသိပ်ကြောက်တာ ဘာတဲ့ သူကပြောသေးတယ် ယောင်္ကျားမှာ ဘုန်းမရှိရင် ဘာလုပ်လုပ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုပဲ…
အဲဒီ ယောင်္ကျားဘုန်း ရှိမှဆိုတဲ့ မိန်းက ကြီးက ညည ကြည့်လိုက်ရင် သူ.ယောင်္ကျား အပေါ်မှာဗျာ.. ဟဟဟဟ. နင်းပေနေတာပြောတာနော်….. ဟေဟေ
ဒီကောင်လေး……သူများအိမ်ကို လိုက်လိုက်ချောင်းနေတာ အကျင့်ကို မပျောက်ဘူး … ။
နင်းနေလို့တော်သေး …. ဟိုကရန်ဖြစ်လို့ ခုံဖိနပ်ပျံတွေ ၊ တမြတ်စည်းပျံတွေ ထွက်လာမှဖြင့် … ။ ပြေးပေါက်မှားနေမယ်
တကယ်တော့ ဒီလိုဖြစ်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ အမြင်မတော်မှာစိုးလို့
တားမြစ်တာကို ဘုန်းတွေကံတွေနဲ့ခြောက်လိုက်တော့ အယူအဆအမှားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့။
မိန်းမထမီ ကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်တာလေး တစ်ပုဒ်ရေးအုံးမယ်။
ကိုယ်ကတော့ ကွန်ဆာဗေးတစ် ဖြစ်နေပြီထင်တယ်။ မွေးကတည်းက စွဲလာတာမို့ ကိုယ့်အတွက်ကိုပဲ အင်္ကျီ လုံချည်၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ခွဲလျှော်တယ်။ မီးပူတိုက်လည်း သီးသန့်တိုက်တယ်။ ရှေးရိုးစွဲလို့ပဲ ပြောပြော အကျင့်ဖြစ်နေတာကို ပြင်ဖို့လည်း မစဉ်းစားမိဘူး။ ပြင်လည်း မပြင်ချင်တော့ဘူး။
ဟေးဟေး တို့ရွာထဲ Progressive တွေအများသားပဲ၊ အရင်က ကျုပ်လည်း အယူသီးချင်သား၊ အိမ်မှာဆို
အမေက မိန်းမတွေရေချိုးတာတစ်ခွက်၊ ယေင်္ကျားတွေကတစ်ခွက်၊ အံမယ် ခြေထောက်ဆေးရည် အိုးက လည်း သတ်သတ် ၊ အဲသလိုနေခဲ့ရတာကိုး။
အဲအိမ်ထောင်ကျတော့ မိဘတွေနဲ့တုန်းကလို ခြံနဲ့ ၀င်းနဲ့ မနေနိုင်တော့ တိုက်ခန်းကလေးမှာပဲနေရတာ၊
ကိုယ်ကလည်းသူများအပေါ်မှာ၊သူများကလည်းကိုယ့်အပေါ်မှာ- အပေါ်ထပ်ခန်းဆို ပိုင်ရှင်က၀ယ်ပြီး လူငှား
ထားတာဆိုတော့ တစ်ခါတလေလူကောင်းတွေနေပေမဲ့၊တစ်ခါတစ်လေဆို ဟို ကာရာအိုကေတို့၊စင်တင်တို့
ကငှားနေတဲ့အခါဆို၊ မမတွေ ကခေါင်းပေါ်တည့်တည့် အီအီးပါချသေးတာကလား။ တစ်ခါတစ်လေ သူရို့လှမ်းထားတဲ့ အင်္ကျီစကပ် ဖားဖားကြီးကအပေါ်က၊ ကျုပ်လှမ်းထားတဲ့ မျက်နှာသုပ်ပုဝါကအောက်က
ကဲ ကြာလာတော့လည်း ကျင့်သားရလာပါပြီ၊ ဂလိုဘယ်လေ— ဂလိုဘယ် ဟဲ ဟဲ။
အဖေဘုန်းနိမ့်မှာစိုးလို့တဲ့ ကိုယ်တွေကလဲစက်တလုံးဘဲဝယ်နိုင်တယ် ၂လုံးလဲမ၀ယ်နိုင်တော့
အမေ့အလစ်မှာခိုးလျှော်တယ် နောက်ပေါ်တင်လျှော်တယ် အမေလဲဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူး
ဘာမှဘုန်းနိမ့်စရာမလိုဘူးတဲ့လေ ကိုနိုဇိုမီပြောသလိုဘဲ သူတို့လဲ
မိန်းမကို.. ရဟန်း (ဘိက္ခူနီ) ပေးမ၀တ်တာတို့..
ဘုန်းကြီးနဲ့.. မိန်းမ တူတူမထိုင်ရတာတို့..
ဘုန်းကြီးက (စင်ပေါ်က)ခုံမှာထိုင်… လူတွေက အောက်ကြမ်းပြင်မှာ ကျုံ့ကျုံ့ ထိုင်တာတို့..မဖြစ်လာအောင်အထိ ပြင်နိုင်ရင်တော့.. ကျန်တဲ့ ရှေးစွန်းစွဲအယူသည်းတာတွေ.. အလိုလို ပျောက်သွားမယ်ထင်မိတယ်..။
မြန်မာပြည်မှာ.. လူအချင်းချင်း… တန်းတူညီမျှမှုဖြစ်အောင်.. အရေးတကြီးဦးစားပေးလုပ်ရမှာလို့ … ထင်တယ်..။
ဂါရဝေါစ တရားကိုတော့ ယနေ့လူ့အခွင့်ရေးနဲ့
သီလတရားမှသည် သစ္စာတရားကိန်းတဲ့ ခန္ဓာတွေကိုတော့
ခန္ဓာက သပ်သပ် ဓမ္မကသပ်သပ်လေ
အမေဂျီးကန်ရဲ့ နိုင်ငံတော်အလံကို သေးနဲ့ပန်းလို့ ဘာဖြစ်မဒုန်း
လူသားချင်းတန်းတူအခွင့်အရေးမှာ..တဖက်သား လွတ်လပ်စွာဆဲရ.. စော်ကားရမယ်တော့ မပါပါဘူးကွယ်..။
တန်းတူမပေး(မယူ)ရကောင်းလားဆိုပြီး.. သေးနဲ့တက်ပန်းချင်တဲ့ စိတ်လေးဖျောက်မှပေါ့..။
လိုအပ်တဲ့.. အပြန်အလှန်လေးစားသမှုကတော့ လူသားဆက်ဆံရေးမှမဟုတ်.. တိရိစ္ဆာန်နဲ့ လူသားဆက်ဆံရေးမှာတောင် ရှိသင့်တာပါ..။
ဇတ်အဆင့်အတန်းခွဲခြားလွန်းတဲ့.. ခေတ်ကာလအတွင်းက ပေါက်ဖွားလာတဲ့.. ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ.. ဒီဇတ်ခွဲခြားမှု..လူ့အဆင့်အတန်းခွဲခြားမှုတွေ.အပြင်းအထန်ချေဖျက်ခဲ့ပေမဲ့..
နောင်အနှစ် ၂၅၀၀ကျော်ကြာတဲ့အခါ .. တနည်းတဖက်နဲ့.. မြန်မာပြည်ထဲလာပြီး… ဇတ်အဆင့်အတန်း ခွဲခြားမှုကို ပြန်အသက်သွင်းမိရက်သားဖြစ်နေတယ်ပဲ မြင်မိတယ်..။
ဒါဟာ..လူသားအချင်းချင်း တန်းတူညီမျှမှုပေးထားတဲ့.. အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေကို… ဖျက်စီးလိုက်ပြီး.. အခုမြန်မာပြည်ရှိနေတဲ့…နေရာတွန်းပို့လိုက်တယ်လို့.. သုံးသပ်တယ်…
ဒီစိတ်အမြုတေကို.. မြန်မာတွေကို ထပ်ခါရိုက်သွင်းရင်း..
ကျန်လူတန်းစားတွေဟာ.. ဒီလူတန်းစား ၂ရပ်ကို ပေးဆပ်ရင်း.. သူတို့စကားတွေကို.. စောကတတက်ခွင့်မရှိ.. နာခံရင်း.. ဘ၀အချိန်တွေ.. (လူသားမဆန်စွာ) ကုန်ဆုံးကြရတယ်..။
အထက်ပစ္စယံကိုတော့ မိန်းမတက်ခွင့် မပေးပါနဲ့ဗျာ။ အခုတောင် ဘုရားပေါ်စုံတွဲများ တက်သောင်းကျန်းလို့ မနဲနှိမ်နင်းနေရတာ၊ အခွင့်သာပေးလိုက်ရင် ရှုခင်းကောင်းတယ်ဆိုပြီး တက်လိုက်ကြမယ့်ဖြစ်ခြင်း။
သဂျီးကိုယ်၌က လူတွေကို ကွန်ဆာဗေးတစ်၊ လစ်ဘရယ် လျောက်သတ်မှတ်နေကထဲက ဟုတ်မှမဟုတ်တာဘဲ။ လူလူခြင်း အဆင့်မခွဲပါနဲ့ အဓမ္မရုပ်ဝါဒီသဂျီးရယ်လို့ ပြောပြန်ရင်လည်း ဓမ္မသစ္စာဝါဒီကြောင်ကြီးက လွန်ဒယ်ဖြစ်အုံးမယ်။
ဂါရ၀တရားရှိတာကို လက်ခံပါတယ် … ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအနေနဲ့ လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်ပါတယ် .. သို့သော်လည်း သူတို့ပြောတာအကုန်အမှန်ဆိုတာကိုတော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး …
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မှန်တယ်ထင်ရင်လက်ခံပြီး မမှန်ဘူးထင်ရင် ပြန်ပြောရဲမယ်ဆိုရင်တော့ အနာဂါတ်မှာ ပိုပြီး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လို့ မြင်မိပါကြောင်း …
ပြောမယ့်သာပြောရတာ … ကိုယ်တွေက လက်အောက်ခံလူတန်းစားမှာရှိနေတုန်းစိတ်နဲ့ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားဖြစ်ချင်မှာရှိနေတဲ့စိတ်က တူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ … ဓမ္မတာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီး … ပြင်ဖို့တော့ လွယ်အုန်းမယ် မထင် …
သဂျီး တို့ သမ္မတကြီး မိန့်ခွန်းပြောလို့ စင်ပေါ်တက်ရင် ဟဲ့ကောင် ငမဲ စင်ပေါ်က ဆင်းစမ်းကွာ.. ငါ့ရှေ့မှာ လေးဘက်လေး ထောက်ပြီး စကားပြောစမ်း ဆိုပြီး ငုတ်တုတ်လေး ထိုင်နားထောင်ပါလား.. အဲလို ပြောတော့ မိုက်ရိုင်းမလား မသိဘူးနော်..
အားလုံးက သူ့နေရာနဲ့ သူပေါ့..
ဆုယူတဲ့လူတွေ တောင် စင်လေးပေါ် တက်ခိုင်းပြီး သတ်သတ် ယူရသေးတာပဲ..
ဘုန်းကြီး တရားဟောတာ အမြင့်က ထိုင်နေတာ သဘောမကျရင် အဲဒီနားမသွားနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာသာနေ.. သဂျီးလို လူမျိုး တရားနဲ့ ဝေးလေး ကောင်းလေပဲ..
အဟမ်းအဟမ်းအဟမ်း ….( ချောင်းဆိုးတာပါ မလန့်ကြပါနဲ့ )
အဲဒါကျတော့ ဘဘဘလက်တို့လို ၀ါရင့်အိမ်ထောင်သည်ကြီးတွေ
ဆွေးနွေးတာလေးကို နားထောင်သင့်ပါတယ်။ ဟားဟား။
ဒီလိုဗျ အန်တီဝေရ။ အဲဒါကျတော့ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးက သူ့ထမီတွေကို
သပ်သပ် သူ့ ဟာသူလျှော်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က ဘာလို့ ရောမလျှော်တာလဲဆိုတော့
ထမီတွေနဲ့ ပေါင်းလျှော်တော့ ဘုန်းနိမ့်မှာ စိုးလို့တဲ့။
တစ်ခါတစ်လေကျရင် ယောင်္ကျားက request လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးဗျို့။
မိန်းမတွေက သူတို့ဟာသူတို့ နားလည်ပေးနိုင်စွမ်းမြင့်ကြတာပါ အန်တီဝေရေ။
အဲဒီကိစ္စက မိသားစုတွင်း ယဉ်ကျေးမှုလို့ပဲ ကျွန်တော် ခေါင်းစဉ်တတ်ချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်မိသားစုထဲမှာ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုလေးနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် သာကောင်းပါတယ် အန်တီဝေရေ။
ကျေနပ်ရင်တော့ အေးဆေးပဲပေါ့ …
အယူသီးနေကြလို့ အလုပ်မဖြစ်ကြတာကို သက်သာသွားအောင် ပြောကြည့်တာလေ … ကျွန်မတို့လို နေ့တိုင်းမိုးလင်းမိုးချုပ် အလုပ်ဆင်းနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆို အိမ်အလုပ်တွေကို management လုပ်ရတာလဲ ပညာပါတယ် … အချိန်ကုန်သက်သာ လူသက်သာတာကို ဦးနှောက်နဲ့သုံးပြီး စီစဉ်ရပါတယ် … တခြားအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ အချိန်ပိုထွက်လာအောင် မနဲလှည့်နေရတာလေ … ဥပမာ ရွာထဲဝင်ချိန် …
မိသားစုများတဲ့အိမ်တွေမှာလဲ အိမ်ရှင်မတွေ အချိန်ပိုထွက်လာဖို့နဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိလာဖို့ ကြိုးစားပေးဖို့လိုတယ်လေ … မလိုအပ်ပဲ အလုပ်ပိုရှုပ်တာတွေမြင်ရရင် ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ကလိကလိဖြစ်လေ့ရှိပါတယ် … မီးဖိုချောင်ကိစ္စမှာလဲ အခုထိခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေတာတွေ မြင်နေရတုန်းပဲ ….
ကျွန်မက တရုတ်မိသားစုတစ်စုနဲ့ တရုတ်ပြည်မှာ တစ်အိမ်ထဲနေခဲ့ဖူးသေးတယ် … မိသားစု ၃ ယောက်ရှိတဲ့ သူတို့အိမ်ရဲ့ နေထိုင်မှုစနစ်ကို သဘောကျခဲ့တယ် …
နောက်များမှ အချိန်ရရင် မီးဖိုချောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေတ်မှီအောင် အသုံးပြုသင့်ပုံနဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများပုံတွေကို ရေးအုန်းမယ် စိတ်ကူးထားတယ် ..
ဂီ့ လိုတယောက်တည်းနေကြလေ …
အေးရော …အဲ့လော့ ခွဲခြားစရာ မလိုတော့ဘူး
ကွိုင်လည်း တက်တော့ဝူး…. ကောင်းဝူးလား …
အဲဒါ အကောင်းရေးတယ် မမှတ်နဲ့ ..
ကြော်ငြာ လား ကြောင်ငြာလား ၀င်နေတာ
မင်ဇက် ၏ ရင်တွင်းဖစ် တွေကို
မစ္ဈိမပဋိပဒါပဲကောင်းပါတယ်.. တအားလည်းအစွဲမကြီးသလို..တအားလည်းပစ်စလတ်ခတ် မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့.. လွတ်လပ်တယ်ဆိုပေမယ့်. .မျက်စိထဲမှာ အမြင်မတောင်တာတွေရှိနိုင်တယ်လေ..
ကိုအောင်ပု မန်.တာ ဒီတခါအကြိုက်ဆုံးဘဲ….
ဟတ်ဟား .. ….
ပြောတော့ မဝေရေ……… ။ ကျွန်တော်တို့ ပြောလို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်လို့ လက်ရှောင်နေတာ…။ မဝေတို့လိုမျိုးက ပြောမှကောင်းမှာ…။ အယူသည်းတာထက်….ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပါးစပ်အရသာခံ ကြွားနေကြတာလို့ပဲ ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဗျာ…။ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုံးလောက်မှန်မလဲ လိုက်ကြည့်ကြည့်ပါလား…။ အဲဒိလိုလူမျိုး ကျွန်တော်ကတော့ ဝေးဝေးကရှောင်တယ်…။ မဖြစ်သာလို့ ပေါင်းသင်းရလည်း သိပ်ဟက်ဟက်ပက်ပက် ခင်လို့မရဘူး…။ တစ်ချို့ရှိသေးတယ်…။ “ငါ့မိန်းမ ဆေးရုံတက်ပြီးဗိုက်ခွဲကလေးမွေးတာ ဘယ်နှစ်သိန်းကုန်သွားလို့ ဒီလ္ဘက်ရည်ဘိုးတော့ မင်းရှင်းလိုက်ကွာ ” …….ဆိုတာမျိုး ….ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူး..။ အသားလွတ်ကပ်ကြွားပြီးပြီးတော့ သူ့မိန်းမ ကလေးမွေးလို့ ငွေကုန်သွားတာနဲ့ လ္ဘက်ရည်တိုက်ရအောင်……………. နော့
ဘကြီးအိမ်မှာဆိုရေချိုးခန်းကနှစ်ခု ၊ယောက်ကျားနဲ့ မိန်းမချိုးတာခွဲခြားထားတယ် ရေခွက်ကနှစ်ခု
တစ်ခုကကန်ထဲမှာပြုတ်ကျနေလို့ ၊တစ်ခုသွားပြီးယူချိုးမိရင်အဆူခံရတယ် ၊ အဲဒါကလေးတုံးကပေါ့ နော်
မိန်းကလေးဖြစ်လို့ ၊ ယောက်ကျားလေးရေခွက်ကိုပေးမချိုးဘူး ၊တစ်ခါတော့မနေနိုင်လို့ ဘကြီးကိုမေးတယ်
ဘာသာရေးအမြင်နဲ့ ပြောပြီးရှင်းပြတယ် ရှင်ပြုရဟန်းခံပြီး ဖြစ်တဲ့ယောက်ကျားကဘုန်းမြင့်တယ် ဘုန်းကံ
မတူလို့ သပ်သပ်စီခွဲထားတာ လို့ ပြောတယ် မလိုက်နာရင်အိမ်မှာပြန်ချိုးလို့ ပြောတယ် လူမှာစရိုက်မတူ
လာကြဘူးတဲ့ ဘကြီးတို့ အိမ်မှာရေချိုးချင်ရင်ဘကြီးတို့ ရဲ့စရိုက်လိုက်နာရမယ်ဆိုပြီး ပြောပြထားတာလေးအမှတ်ရလို့ ..ပြောပြမိပါတယ်.ကြီးလာလို့ ခံယူမိတာက
ဘ၀ပေးအခြေနေတိုင်း လူတွေနေကြရတယ် လောကမှာကိုယ်
နေချင်သလို မဖြစ်ကြတာအမှန်ပါဘဲ အဆိုတစ်ခုလိုပေါ့ ရောမရောက်ရင်ရောမလိုကျင့်ကြရမယ်ဆိုတာလေးကိုပါ.မှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာ အမြင်ချင်းမတူလို့ ပါ..
အယူအဆတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူပါဘူး ဒါကိုငြင်းခုံမိရင် ပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်နိုင်တာ
မို့ တူတာချင်းချင်းဘဲကောင်းပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါရစေ..။
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ရှေးထုံးဆိုရင်ယူသုံးပြီး မကြိုက်တဲ့ဟာဆို ပယ်လိုက်တာဘဲ…. ဈေးသုံးလည်း ကြွယ်ချင်ကြွယ်လိုက်တာဘဲ…အဓိကက ကိုယ့်စိတ်ကျေနပ်ဖို့ဘဲ မဟုတ်လား….အ၀တ်အစားကိုတော့ ထမီနဲ့ရောလျှော်တာ လုံးဝမကြိုက်ဘူး…သူ့ category နဲ့သူခွဲလျှော်မှကြိုက်တယ်…
မဟာပုရိသ၀ါဒ လက်ကိုင်ထားတဲ့သူမဟုတ်ပေမဲ့ မြင်တာလေးတွေတော့ ပြောခွင့်ပြုပါ… အခုခေတ်မှာ မိန်းခလေးတွေက အလုပ်ရဖို့အခွင့်အရေးပိုများပြီး ကိုယ်တိုင်ပိုက်ဆံရှာနိုင်ကြပြီ ဆိုတော့ အရင်လောက် သိမ်မွေ့မှုမရှိတော့ဘူး…ငါ့ပိုက်ဆံငါရှာနိုင်တယ်ဆိုပြီး မာန်တက်လာတယ်….လူလားမြောက်တဲ့ထိ ရှာကြွေးခဲ့ဖခင်ကိုတောင် ပြန်ခံပြောတဲ့အထိ မာန်တက်လာတယ်… လင်ယောက်ျားပေါ်လည်း ရိုသေမှု လျော့လာတယ်….လူကြီးတွေအပေါ် ထားတဲ့ ဂါရ၀တရား လျော့နဲလာတယ်.. လူတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့ တော်တော်များများ တွေ့နေရပါတယ်… အနောက်တိုင်း ရှုထောင့်ကကြည့်ရင် မဆန်းပေမဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ရှုထောင့်ကကြည့်ရင် ဒါတွေဟာ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေပါ…ဒီရွာထဲက မမတွေကတော့ ဒီလိုစိတ်မျိုးမရှိဘူး ထင်ပါတယ်…(ကြိုကာထားတာ…)… ယောက်ျားတွေကြတော့ မီသားစုကို ရှာကြွေးဖို့က သမိုင်းပေးတာဝန်ဆိုတော့ ပိုက်ဆံရှာနိုင်လည်း အများစုက မာန်မတတ်ကြပါဘူး…
ဖို၊မ ခွဲခြားတာ မဟုတ်ပေမဲ့ သူ့configuration နဲ့သု ….ကျားနေရာကျား ၊ ငါးနေရာငါး နေတာဘဲ ကောင်းပါတယ်…ရွှေငါးလေးတွေလိုဘဲ ချစ်စရာကောင်းလို့ ‘ ငါး ’ လို့သုံးတာနော်…စိတ်မဆိုးနဲ့ ..း) …. ကျွန်တော်ပြောတာ မှားတယ်ထင်ရင် လွတ်လပ်စွာဝေဖန်နိုင်ပါတယ်…..
ဖိုမ ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့အကြောင်းတော့ မပြောပါဘူး၊ထမိန်ကိစ္စကိုနဲနဲပြောပါမယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လစဉ်ကျန်းမာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဟိုတုန်းက အီဗာ ဘာညာမရှိဘူးမဟုတ်လား။ အခုခေတ်မှာတော့ အဲဒီအချိန်လေးမှာ ရောမလျှောပဲ သပ်သပ်လေးရေစိမ် လက်နဲ့လျှော်ပြီး ဆင်ခြင်လိုက်ရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ။
ဗမာတွေက မလုပ်သင့်တာကို ပြောရမဲ့အစားအကြောက်တရားနဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ ဘုရင်စနစ် ကအရိုးစွဲနေတော့ ခြောက်တာက အကျင့်ပါနေတယ်၊ မလုပ်ကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ရောချတယ်။ဘာကြောင့်မလုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုရှာရင်၊ ဘယ်အချိန်၊ဘယ်အခြေအနေ၊မျိုးမှာ လုပ်သင့်တယ်၊မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာပေါ်လာမှာပါ၊လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာလည်း တသမတ်တည်းမဟုတ်သလို၊မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာလည်းတသမတ်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။
အပေါ်မှာမန့်ထားတဲ့ စလောင်းဖုန်းနှစ်ချပ်တီးရင် ကျားကိုက်တတ်တယ် ဆိုတာအပါအ၀င်။
အိမ်ဆောက်ရင် သစ်ပင်လယ်ကူးမဆက်ကောင်းဘူးဆိုတာတို့ ဓနိပြောင်းပြန်မမိုးကောင်းဘူးဆိုတာတို့ အချင်ဝါးစောက်ထိုးမတင်ကောင်းဘူးဆိုတာတို့ နဲ့တခြားနေရာမှာသေတဲ့မသာကို ရွာထဲပြန်မသယ်ကောင်းဘူး၊မသာသယ်ရင် အိမ်ရှေ့မှာမရပ်တန့်ကောင်းဘူး ဆိုတာတွေအပါအ၀င်အခြားတလွဲဖြစ်နေတဲ့အယူအဆတွေအများကြီးကို မလုပ်ကောင်းဘူးဆိုတာထက် မလုပ်သင့်ဘူးလို့သုံးသင့်ကြောင်း ဘာကြောင့်မလုပ်သင့်သလဲ လို့ ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ရှင်းလင်ချက်တွေနဲ့ အတူ မြန်မာ့ရှေးရိုးစွဲအယူအဆများ၏အနှစ်သာရများ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ MG ကိုရောက်ကာစက တင်ဖို့ ကျနော်ရေးထားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများနဲ့အယူအဆမတူရင် မကောင်းပါဘူး၊ ပွဲဆူသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြန်ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ အဲဒါကို ပြောချင်နေတာ …
တစ်ယောက်ရှိတော့ နှစ်ယောက်အတူတူ အဆဲခံကြတာပေါ့…
ထမိန်ဆိုတာ ဘုန်းနိမ့်တယ် ဘာနိမ့်တယ် ဆိုတာထက် အဲဒီ့ ကျန်းမာရေး ကိစ္စကြောင့်ပါ..
အဲဒီတော့ ထမီတော့ ရောလျှော်တာ မသင့်ဘူး ထင်တယ်ဗျာ …
ဘုန်းဆိုတာ နောက်ကိစ္စ ထားလိုက် … အဲဒါတော့ နဲနဲ စိတ်မသန့်သလိုပဲဗျ …။
နဲနဲ ရိုင်းရိုင်း ဥပမာပေးရရင် အိမ်သာထဲက လက်သုတ်ပ၀ါနဲ့ ထမင်းစားပြီး သုတ်တဲ့ လက်သုတ်ပ၀ါ လက်သုတ်ပ၀ါချင်းတူတူပဲဆို တစ်ခုထဲ ထားလို့ မရသလိုပေါ့ဗျာ … ။
ထမီကလွဲရင် ဘာဖြစ်ဖြစ် ထည့်လျှော်ပါ ။ အိမ်မှာလဲ စက်က တစ်လုံးထဲပါ ..
အမတွေ ညီမတွေ သူတို့ အင်္ကျီ ဘော်လီ ထည့်လျှော်နေတာပါပဲ …။
ထမိန်တော့ ခွင့်လွှတ်ဗျာ …
ဦးဘပု ကို လေးစားတယ်…ကိုကြောင်လေး မန်းတာကို ကြိုက်တယ်… အ၀တ်လျှော်စက်မရှိတော့ အဲဒီပြဿနာမရှိသေးဘူး….
မြန်မာပြည်မှာ အ၀တ်လျှော်စက် ထုတ်လုပ်နိင်တဲ့အခါကျရင် စက်တလုံးထဲနဲ့ အစဉ်ပြေအောင် အလယ်ခေါင်က အကန့်တခုထားပေးဖို့ ပြောရမယ်…..two dooor အ၀တ်လျှော်စက်ပေါ့ မမိုက်ဘူးလား အားလုံးအစဉ်ပြေအောင်ပေါ့…:):P
သဂျီးကို ၀ိုင်းတွယ်နေပါလား ဟရို့ ….
ခြေပြတ် ဂိုးပြတ်တွေ ဖြစ်ကုန်ပါပီခည…
ဟေ့ကောင် စနိုက်ပါနော် စနိုက်ပါ ..
ဒီပိုစ်လေးကိုဖတ်ပြီး ကျနော်ကတော့ တပုဒ်ရေးလိုက်ပြီ။